काठमाडौं । सामान्यतया निजामती सेवा, प्रहरी, सेना जहाँसुकै पनि अवकाशको मुखमा भएको मान्छेलाई महŒवपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारी नदिने परम्परा नै छ । अवकाशको मुखमा महŒवपूर्ण ठाउँ दिनु भनेको लुट्न जा भनेजस्तो हो भन्ने बुझाइ छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा अवकाश हुन केही महिना मात्र बाँकी भएका एक विवादास्पद व्यक्तिलाई ल्याएका छन् ।
इमानदार छवि भएका भुवनेश्वर आचार्यलाई हटाएर मन्त्री विष्टले विभागको महानिर्देशकमा गृहमा भएका दिलीप चापागाईंलाई ल्याएका हुन् । उनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका मान्छे हुन् । लामो समय एलडीओ भएका उनी कर्मचारी प्रशासनभित्र सबैभन्दा बदनाम एलडीओका रूपमा चिनिन्थे । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको बेला झन्डै सात जिल्लाको एलडीओ भ्याएका उनले त्यही समयमा अथाह पैसा कमाएको बताइन्छ । एलडीओका रूपमा सबैभन्दा पछि उनी रामेछाप जिल्लामा कार्यरत थिए । त्यहीबेला सहसचिव बढुवा भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले आफूलाई चुनाव जिताउन धनुषाको सीडीओ बनाएर लगेका थिए । निधिलाई चुनाव जिताउन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि उनको केही लागेन ।
धनुषामा कांग्रेस नेता निधिको निकट अर्का एक कर्मचारी छन्, जीवनाथ चौधरी । उनी जिविसको लेखापालमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर अहिले पनि निलम्बनमा छन् । विशेष अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ । धनुषाको अपराधको सम्पूर्ण जननी नै सञ्जय टक्ला यिनै चौधरीलाई मानिन्छ । टक्लालाई निधिले नै सिध्याइदिए, तर चौधरीलाई संरक्षण गरे । चौधरीले जानकी मन्दिरको हजारौं बिघा मन्दिर रामतपेश्पर दास भन्ने महन्थसँग मिलेर झ्वाम्प । तिनै चौधरीसँग मिलेर चापागार्इंले धनुषामा अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पताल, क्लिनिक आदि सबैसँग पैसा उठाएर करोडौं कमाइसकेको बताइन्छ । यिनै मान्छे अहिले मन्त्री विष्टको प्यारो भएको देख्दा नेकपाका कार्यकर्तासमेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।
कोठा चित्त नबुझेपछि एआईजी बिदामा
संसद्मा मस्तीपछि राजदूतमा दौड
तथ्य पन्छाएर पौडेलमाथि राजनीतिक आक्रमण
सरुवा गर्ने भन्दै तर्साउँदै असुल्दै
नौ करोड भ्याट छल्नेलाई पदक
‘भिनाजु’ भन्दै यस्तो धन्दा
प्रधानन्यायाधीशको कोटामा शर्माको बाजी
मामा अख्तियारमा, भान्जाको यत्रो सान
अर्जुनको प्रभावमा यस्तो निर्णय ?
मन्त्रीका कारण सबै प्रतिष्ठान र अस्पतालमा विवाद
आफ्नै भवन खाली, भाडामा लिएर कमिसन खाने ?
नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन जाली काम